Abaphumelele kuma-Oscar abangama-26 ku-DC comic adaptations | Izincwadi Zamanje
kuze Abadlali abangama-22 abawine ama-Oscar Sibonile ku-DC movie okungenani okungenani abanye abane sizobona maduzane.
Inani elikhulu labalingisi abathole umklomelo weHollywood Academy Ngaphambi noma ngemuva kokusebenza kwi-DC adaptation, omunye wabo waze wathola i-Oscar ngokudlala isikhohlakali esifana neJoker, icala lowadlula emhlabeni uHeath Ledger.
Umlingisi wokuqala owina u-Oscar ukuvela kwi-DC adaptation kwaba UMarlon Brandoubani ngo-1955 wathola isithombe sakhe sokuqala njengomlingisi ohamba phambili ku 'The Law of Silence' ('On the Waterfront') nokuthi ukuphindile esigabeni esifanayo ngo-1973 i-'The Godfather '. Udlale uJor-El kwifilimu ka-1978 ethi 'Superman'.
Futhi ku 'Superman' kwavela omunye ophumelele kabili ku-Oscar, UGene Hackman, i-WHO wanika impilo uLex Luthor, ibizophinda ephepheni ngo-1980 ku 'USuperman II' futhi ngo-1987 ku 'USuperman IV', ama-Academy Awards afika kuye ngo-1972 nge 'The French Connection' y ngo-1993 'Unforgiven' ('Ngaphandle kokuxolelwa'), bobabili njengomlingisi osekelayo.
Wanikeza impilo kuJean Pierre Dubois ngo-1987 kukhasethi elithi 'Superman IV' futhi ngawina i- U-Oscar womlingisi ohamba phambili ngokusekela ngo-2002 ngefilimu ethi 'Iris'.
UJack Nicholson wayenguJoker wokuqala esikrinini esikhulu kwifilimu kaTim Burton ka-1989 ethi 'Batman', phambilini wayewine i-Oscar umlingisi ohamba phambili ngo-1976 we-'One Flew Over the Cuckoo's Nest ' ('One Flew Over the Cuckoo's Nest') manje Umlingisi Osekela Kakhulu ngo-1984 we-'The Force of Affection ' ('Terms of Endearment'), ngemuva kokulingisa kwifilimu ye-DC azoyithola u-Oscar wakhe wesithathu ngo-1998 'Okuhle… akunakwenzeka' ('Okuhle Njengoba Ithola'), futhi njengomlingisi oholayo.
Futhi e 'Batman' sabona uKim Basinger, owathola ezicathulweni zikaVicki Vale, eminyakeni eyalandela, ngo-1998, wayezowina i- U-Oscar we-Best Acting Actress we 'LA Confidential'.
Owinile U-Oscar womlingisi ohamba phambili ngokusekela ngo-1992 we 'City Cowboys' ('City Slickers'), kwavela futhi ku 'Batman' enikeza impilo kuCarl Grissom.
Kakade sekungukufakwa kwesibili kukaBatman, 'UBatman uyabuya ' ('Batman Returns'), siyathola UChristopher Walken njengesikhohlakali uMax Shreck, ngaphambi kokuthi ngithole i- U-Oscar womlingisi ohamba phambili ngokusekela ngo-1979 we 'The Hunter' ('Umzingeli Wenyamazane').
Ku 'Batman Phakade' kusukela ngo-1995 siyabona UNicole Kidman njengoDkt Chase Meridian, ngonyaka we-2003 uthole lesi sithombe ngokunikela ngempilo kuVirginia Woolf ku-movie ethi 'Amahora' ('Amahora').
Owinile wemiklomelo emibili yaseHollywood Academy, ngonyaka we-2006 njengomlingisi osekelayo we 'Syriana' futhi ngo-2013 cNjengomkhiqizi we-'Argo ' uthathe umklomelo wefilimu ehamba phambili, UGeorge Clooney wayenguBatman kwifilimu ka-1997 ethi 'Batman and Robin' ('UBatman noRobin').
Yize kumzuzele iRazzie njengomlingisi omubi kakhulu wonyaka ukulingisa ifilimu 'Catwoman' ngo-2004, eminyakeni edlule ngaphambi kokuba akhombise ukubaluleka kwakhe ngale filimu 'IMonster's Ball' imholele ekuqoqeni i-Academy Award ngo-2002.
e 2005 URachel Weisz wadlala u-Angela Dodson ekuguquleni u-'Constantine ', ngemuva konyaka wathola i- U-Oscar we-Best Acting Actress we 'The Constant Gardener' ('Ingadi Engapheli').
Won i-Oscar ye-Best Supporting Actress ka 'Michael Clayton' ngo-2008, ngaphambi kokuthi adlale UGabriel kutheyiphu ethi 'Constantine'.
I-Batman evela ku-trilogy kaChristopher Nolan mayelana 'The Dark Knight', owanikeza uBruce Wayne impilo nokuziqhenya kwakhe e 'Batman Begins' e 2005, ku 'The Dark Knight' ('The Dark Knight') ngo-2008 futhi ku 'The Dark Knight: Inganekwane Iyaphakama' ('The Dark Knight Rises') ngo-2012 wanikezwa umklomelo weHollywood Academy Umlingisi Osekela Kakhulu ngo-2011 we 'The Fighter'.
Ophumelele kabili u-Oscar, ngo-1987 nguHannah nodadewabo ' ('UHana Nodadewabo') naku-2000 'Imithetho yendlu ye-cider' ('I-Cider House Rules'), zombili izikhathi njengezesekondari, wayengumphathizitsha U-Alfred ovela ku-'The Dark Knight 'trilogy nguChristopher Nolan.
Futhi uma uMichael Caine edlala u-Alfred ku-trilogy kaNolan, UMorgan Freeman uthatha indawo yomunye umsizi kaBatman, uLucius Fox, kulawo ma-movie amathathu. Umlingisi onikezwe lesi sithombe Umlingisi Osekela Kakhulu ngo-2005 we-'Million Dollar Baby '.
Umnqobi we-Oscar a Umlingisi Osekela Kakhulu ngo-1996 we-'The Usual Suspects ' ('Abasolwa Abajwayelekile') manje Umlingisi ohamba phambili ngo-2000 we-'American Beauty ', wanikela ngokuphila ULex Luthor kwifilimu ethi 'Superman Returns' of 2006.
U-Eva Marie Saint
Udlale uMartha Kent, umama wokutholwa eZweni likaSuperman futhin ifilimu yango-2006 ethi 'Superman Returns', ngaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka ngaphambili, Ngo-1955, wawina i-Oscar njengomlingisi oxhasa kakhulu 'Umthetho Wokuthula' ('EWaterfront').
UHeath Ledger nguye ngumlingisi kuphela onqobe u-Oscar wakhe odlala indima ekuguqukeni kweDC, ngokudabukisayo wakwenza ngemuva kokufa ngo-2009 ngokudlala uJoker kwifilimu ethi 'The Dark Knight' (Umnyama Knight ').
Wazifaka ezicathulweni zomubi UHammond kwifilimu ka-2011 ethi 'Green Lantern' ( 'Green Lantern'), kodwa akaze ezwe kakade won U-Oscar womlingisi ohamba phambili ngokusekela ngo-2004 we-'Mystic River '.
Umnqobi we- Oscar ngomlingisi ohamba phambili ngokunikeza impilo ku-Edith Piaf kule filimu 'Impilo epinki '(' La môme ') ngo-2008, wazifaka ezicathulweni ze umlingiswa ongaqondakali kwifilimu ka-2012 ethi 'The Dark Knight Rises', isitolimende sesithathu nesokugcina se-Batman trilogy eqondiswe nguChristopher Nolan.
Futhi ngo-2012 naku- 'I-Dark Knight Iyaphakama' singabona u-Anne Hathaway, ngubani ngonyaka olandelayo wawina i-Oscar njengomlingisi ohamba phambili ngokulingisa ngendima yakhe 'Les miserables' ('Les Misérables').
Umnqobi we- U-Oscar womlingisi ohamba phambili ngo-2001 we-'Angqondo enhle ' ('Umqondo Omuhle'), unika impilo eJor- El, Ubaba ongizalayo kaSuperman 'Kumuntu Wensimbi', indima esivele idlalwe ngumnqobi ophindwe kabili ku-Oscar uMarlon Brando ngo-1978.
Futhi uma indima kababa ka-Superman kababa ku-'Man Steel 'iwukuba owine u-Oscar, leyo kababa wakhe wokutholwa eMhlabeni ibingeke ibe ncane, ophumelele kabili u-Oscar UKevin Costner, isitembu njengomkhiqizi nesitembu njengomqondisi 'Wokudansa nezimpisi' ('Ukudansa Nezimpisi') kudlala uJonathan Kent.
Maduze nje sizobona ophumelele ama-Oscars amabili UBen Affleck njengoBatman omusha ku 'Batman v Superman: Dawn of Justice'. Izithombemifanekiso zamukelwa futhin 1998 njengombhali wesikrini we-'The Indomitable Will Hunting ' ('Ukuzingela Okuhle') futhi njengomkhiqizi we-'Argo 'ngo-2013.
Maduze nje sizokwazi nokubona kule filimu 'Batman v Superman: Ukuqala Kwezobulungiswa' kuya ku Umnqobi ka-Oscar ongumlingisi ohamba phambili we 'The Piano' ('The Piano') ngo-1994.
Al Owinile u-Oscar njengomlingisi ohamba phambili we 'The Mystery of Von Bulow' ('Reversal a Fortune') ngo-1991 sizokwazi ukuyibona kungekudala njengo-Alfred, Umphathizitsha kaBruce Wayne ku-'Batman v Superman: Dawn of Justice '.
Eqenjini Lokuzibulala sizokwazi ukubona kungekudala Umnqobi ka-Oscar womlingisi ohamba phambili we-'Dallas Buyers Club ' e 2014 njengehlaya elisha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Abaphumelele ama-Oscar abangama-26 ekuguquleni amahlaya e-DC
Okuthunyelwe okuthakazelisa kakhulu, umsebenzi wokuhlanganiswa uyaziswa 🙂
"La Favorita", Aurora García Mateache, indaba yothando phakathi kuka-Alfonso XII no-Elena Sanz